လောကုတ္တရာလိုင်းကသစ္စာရှိရမယ် | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
လောကုတ္တရာလိုင်းမှာ လိုက်တဲ့အခါကျ သစ္စာရှိဖို့လိုတယ်။ သစ္စာမရှိဘဲ ဟိတ်လုံး ဟန်လုံးနဲ့ ဟောင်ဖွာ ဟောင်ဖွာ လူကြားကောင်းအောင် ပြောရုံနဲ့ သစ္စာနဲ့က တစ်ခြားစီပါ။ သစ္စာတရားကို မှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်မှ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်မယ်။
(Take what you want but pay for it.) ဆိုတဲ့ စကားမျိုးလိုပဲ – သာသနာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တာဝန်သိသိ သစ္စာရှိရှိ စကား ပြောနိုင်အောင် ကြိုးစားရင် ပြောပါ – ဒါပေမယ့် ပေးဆပ်ပြီး လေ့လာရမယ်။
ကိုယ်က ပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက် ကျင့်ကြံအားထုတ်ထားတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး သာသနာကို အဲဒီလို ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ လျှောက်ရမ်းနေလို့တော့ မသင့်တော်ဘူး။ သာသနာအကြောင်း ပြောချင်ရင် သာသနာကို ပိုင်မှပြောပါ။ ဘာမှ တရားရှာ ထောင်မှာတွေ့တွေ ဘာတွေ လျှောက်လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။
ငြိမ်ငြိမ်နေရင် ရရဲ့သားနဲ့လည်း ဟိုဘာသာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်၊ ဒီဘာသာနဲ့ နှိုင်းယှဉ် – လောကုတ်ချော်နေတာလည်း လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ လမ်းစဉ်က ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကျင့်ရမယ်။ ကိုယ့်ဖာသာ ချမ်းသာရင် ပြီးတာပဲ။
ဗုဒ္ဓာဘာသာရဲ့ သဘောတွေက လွဲမှားနေလို့ နောင်လာနောင်သားတွေ အယူမှားမှာကို ဆင်ခြင်သင့်တယ်။ ပေါက်မြောက်အောင် ကျင့်စမ်းပါ၊ ကျင့်ပြီးရင် ပြောစမ်းပါ။ မကျင့်နိုင်ရင်လည်း မပြောဘဲ ဆိတ်ဆိတ်နေတာ ပိုကောင်းတယ်။ ပရိသတ် အားလုံးဟာ ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို တိမ်ကောအောင် လုပ်သလို ဖြစ်နေတယ်။ နက်ရှိုင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြောင်းတွေဟာ နစ်မြုပ်လာတယ်။
ပြောစမ်းပါ နိဗ္ဗာန်အကြောင်း၊ ပြောစမ်းပါ အနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်အကြောင်း၊ ခက်ခဲနက်နဲ့တဲ့ တကယ့် အမှန်တရားတွေကျတော့ မပြောဘဲ၊ ပြောနိုင်အောင် မလုပ်ဘဲ အပေါ်ယံတွေလုပ်ပြီး တရားနာ ပရိသတ်ကို ဉာဏ်တိမ်အောင် လုပ်သလို ဖြစ်နေတယ်။ အင်မတန် တာဝန်ကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။
ဒီတော့ နောက်နောင် သာသနာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောလို့ရှိရင်တော့ အရေးယူ တိုက်ခိုက်ရမယ့်အကြောင်း သတင်းကောင်း ပေးအပ်ပါတယ်။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, လောကုတ္တရာ
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, လောကုတ္တရာ. Bookmark the permalink.